မမသီရိ: If We Hold on Together
ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတွေ ၊ ဆင်တွေ မျောက်ဝံတွေ မြေခွေး တွေ၊ ဝေလ ငါးတွေ မပေါ်ခင်တုန်းက ဒိုင်နိုဆောပဲ ဒီကမ္ဘာကြီးကို ကြီးစိုးခဲ့ကြတာ တဲ့.... သစ်ရွက်စိမ်းတွေ ပေါများပြီး အစာရေစာ ကြွယ်ဝတဲ့ မဟာလွင်ပြင်ကျယ် ကြီးဆီ ကို ခရီးချီ ခဲ့ကြတဲ့ ဒိုင်နိုဆော အုပ်စုအချို့ ရှိခဲ့ဖူးတယ်..
အဲဒီအချိန်က ဒိုင်နိုဆော မျိုးစိတ်တွေ မှာ.. သွားချွန်တဲ့ အသား စား မျိုးစိတ်နဲ့၊ အရွက်စား မျိုးစိတ် ရယ်လို့ အခြေခံ အုပ်စုကြီး ၂စု ရှိခဲ့ပါသတဲ့...
Little Foot လို့အမည်ရတဲ့ လည်ပင်းရှည်မျိုးစိတ် ဒိုင်နိုဆောကလေးငယ်လေး တယောက် ဟာ ဒိုင်နိုဆော ကမ္ဘာ ထဲမှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်.. သူ့ကိုမွေးတဲ့အချိန်နဲ့ မရှေးမနှောင်းမှာပဲ.. ရန်လိုပြီး မာနထောင်လွှား တဲံ ချို၃ ချောင်းမျိုးစိတ်က Cera အမည်ရတဲ့ ဒခိုင်နိုဆောမလေး တစ်ကောင်ကို မွေးဖွားခဲ့တယ်..
တနေ့မှာတော့ မဟာလွင်ပြင်ကျယ် စားကျက်ကြီး ကို သွားနေကြတုန်း.. Little Foot နဲ့ Cera တို့ဟာ အသားစား ဒိုင်နိုဆောကြီးရဲ့ ရန်ပြုတာခံခဲ့ရတဲံ အပြင်.. ကမ္ဘာဦးမြေလွှာ ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ ပြင်းထန်းတဲ့ ငလျင်ကြီးကြောင့် မိသားစု နဲ့ ဝေးခဲ့ကြတယ်.. Little Foot ရဲ့အမေကတော့ အသားစား ဒိုင်နိုဆောကြီး နဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့ရလို့ ရယ်၊ မြေငလျင်ဒဏ်ကြောင့်ရယ် မီးတောင်ပေါက်ကွဲတဲံ့ဒဏ်ကြောင့်ရယ် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်..။ အမေသေဆုံး လို့ စိတ်ဓါတ်ကျနေတုန်း လမ်းပျောက်ခဲံတဲံ Little Foot ကလေး ဟာ.. သူ့ အမေမှာကြားခဲ့၊ သင်ကြားခဲ့တဲံ စကားတွေ နဲ့ အမေ့ လက်ဆောင် သစ်ရွက်စိမ်းကလေး ကြောင့် အင်အားတွေ ပြန်ဖြစ်လာပြီး သူ့နဲ့ ဘ၀ တူ မိဘ ကလေး ငယ်တွေ ကို ဦးဆောင်ရင်းနဲ့ မဟာလွင်ပြင်ကျယ် ဆီ ကို အရောက်သွားခဲ့ကြတဲံ ဇာတ်လမ်းကလေး ပါ.... The Land Before Time လို့အမည်ရပါတယ်..။ အတော်များများလဲ ကြည့်ဖူးပြီးသား သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ကလေးတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်ခဲ့တာပေမဲ့ လူငယ်တွေ နဲ့ လူကြီးတွေ အတွက်လဲ သင်ခန်းစာယူစရာတွေ အများ ကြီး ရှိတဲံ ဇာတ်လမ်းလေး ဖြစ်ပါတယ်..။
၁၉၈၈ ခုမှာ Universal Studios က စီစဉ်ပြီး ဒါရိုက်တာ Don Bluth ၊ နဲ့ executive-producers တွေက Steven Spielberg, George Lucas, Kathleen Kennedy, နဲ့ Frank Marshall. ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအခွေလေး ကို ကျမတို့ ရဲ့ လူငယ်ပရောဂျက်မှာ သင်ခန်းစား တခု အနေနဲ့ ထည့်သွင်း အသုံးပြုခဲ့တာပါ..။ အဲဒီ ဇာတ်လမ်းရဲ့ ဇာသိမ်းပိုင်းမှာ Diana Ross သီဆိုထားတဲ့ နာမည်ကျော်သီချင်း If We hold on Together ကလဲ အဓိပါယ် အလွန်ပြည့်ဝတဲ့ သီချင်းလေးတပုဒ်ပါ။ ကျမတို့သင်တန်းတွေရဲ့အဓိကအသုံးပြုတဲ့ သီချင်းတပုဒ်လဲ ဖြစ်ပါတယ်..။
ဒီဇာတ်ကား ကလေး ကို လူငယ်တွေကိုပြသပြီး.. ကောက်ချက်ကလေး ဆွဲ နှုတ်တိုင်း ကျမရဲ့ မျက်စိ နဲ့ အတွေးထဲမှာ.. ကျမတို့ ရဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ကို အမြဲ အမှတ်ရမိပါတယ်..။
သူမအနေနဲ့ ခုနေချိန်ခါ အခက်အခဲတွေ နဲ့ ဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ မီးတောင်တွေ ကျော်နေရသော်လည်း သူမချစ်တဲံ မြန်မာပြည်သူလူထု အတွက် ဆက်လက် ဦးဆောင်သွားမယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်..။
တဆက်တည်းမှာပဲ.. ၁၉၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား တွေ လဲ ပဲ If We Hold On Together သီချင်းလေးနဲ့ ဆက်လက်ပြီး ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့ လက်တွဲ မဖြုတ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းရင်း နဲ့ .. လူထုခေါင်းဆောင် ရဲ့ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ မွေးနေ့ ကို ဂုဏ်ပြု လိုက်ပါတယ်..။
Theme to: The Land Before Time
Posted by မမသီရိ at 6/15/2011 07:43:00 PM